October 2009 - शखदा साहित्य
श अर्थात् स को महिमा
5:14 AM संस्मरण
साहित्यको पछाडि कारको उपहार पाएर फुरुङ्गपरेपछि केही लेख्नै पर्ने बाध्यताले जकडिएँ म । केही लेख्नु पर्यो भनेर घोत्लिन थालेँ । कुनै नयाँ रचना सिर्जना गर्न त खारिएको मस्तिष्क र माझिएको परिपक्वता हुनु पर्दछ । शायद यस्तै कुराको अभावले होला धेरै प्रयास गर्दा पनि मेरो दिमागमा केही फुर्न सकेन । म शुन्यतामा हराउन पुगेँ । यसै शुन्यतामा म 'श' अर्थात् 'स' अक्षरसँग साँठगाँठ गर्न पुगेँ । 'श' अर्थात् 'स' अक्षरले त मेरो जीवनमा ठूलो महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको रहेछ । कुनै चलचित्रमा प्रमुख नायकले सम्पूर्ण कथावस्तु ओगेटेको जस्तो । यसपछि म शब्दकोश पल्टाउन पुगेँत्यहाँ मैले श अथार्त श ले ससार गाँजेको देखेँ। हाम्रा अग्रज साहित्यकाहरूले 'म' कि 'त' को मात्र महिमा गाएका रहेछन् । मलाई अचम्म लाग्यो 'म' र 'त' लाई सजिलै पोल्टामा हाल्ने 'श' अर्थात् 'स' को महिमा किन नगाइएको होला भनेर ।
लौ अब तयार हुनुहोस् 'श' अर्थात् 'स' को अपरिमित महिमा सुन्नलाई । 'श' अर्थात् 'स' ले 'म' अर्थात् मलाई कसरी कुम्ल्याएको रहेछ भनेर म यहा“ वृतान्त सुनाउन गइरहेको छु । म अर्थात् मेरो नाम श बाट उच्चाहरण भएको छ अनि मेरा चार वटा छोराछोरीको नाम पनि 'श' अर्थात् 'स' बाट शुरु भएको छ । मेरो जीवनको धेरै जसो शुभकार्य शुक्रबार सम्पन्न हुँदै आएको छ । मेरो शुभविवाहको सुकार्य पनि फागुन सड्क्रान्तिको दिन शुक्रबार नै सुसम्पन्न भएको थियो भने त्यसको ठीक सात वर्षछि एसओएस मा मेरो सुकार्य शुभारम्भ पनि सोही दिन अर्थात् फागुन सड्क्रान्तिको शुक्रबारदेखि शुरु भएको थियो । जहाँबाट मेरो साहित्यिकयात्रा शुरु भएको थियो । मेरो दुइ छोरी एक छोरा पनि शुक्रबार नै जन्मेका छन भने धेरै जसो शुभकार्य शुक्रबार नै सम्पन्न हुँदै आएका छन् । त्यस्तै 'सानी पुस्तकमा मैले पाएको पुरस्कारको घोषणा पनि मैले माघे सड्क्रान्तिको दिन शुक्रबार साँझ करीब साढे सात बजे शुभ समाचार सुनेको थिएँ भने उक्त पुस्तकको विमोचन पनि साट्ठी सालको शिक्षा दिवसको दिन भएको थियो । यस्तै सानीको दास्रो भाग सानीको साहसले अन्तर्राष्टिय नेपाली साहित्य समाजको पुरस्कार पाएको शुभसमाचार पनि मैले सावने सङ्क्रान्तिको दिन विहान सात बजे थाहा पाएकी थिएँ । यस्ता अन्य पनि धेरै घटनाहरू छन् जो मेरो जीवनमा 'श' अर्थात् 'स'ले बेरेर राखेको छ । यो त भयो 'श' अर्थात् 'स' ले मसँग गाँसेको नड. मासुको सम्बन्ध । यसरी मलाई 'श' अर्थात् 'स'ले हाड नाताको साइनो गाँसेपछि मैले पनि श अर्थात् स सँग हाडनाताको साइनो गाँस्न मेरा पुस्तकहरूको शीर्षक 'श' अर्थात 'स' बाट नै सुरु गर्न थालेँ । यसको सबुतप्रमाण 'सिन्केको सफलता' 'सवत्-अफिस', 'समयको क्यानभासमा', आदि हुन ।
अब हेरौँ 'श' अर्थात् 'स' ले 'त 'अर्थात् तपाईँसँग खेलेको पोठेजौरी । तँ अथवा तपाईसँग 'श' अर्थात् 'स' अक्षरकेा सम्बन्ध तपाईँको शरीरको सास पसेदेखि प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा समाहित भएको हुन्छ । तपाईँको मृत्यु भइसकेपछि पनि तपाईँप्रति गरिने श्रद्धाञ्जली सम्वेदना र सालै पिच्छे गरिने श्राद्धमा पनि तपाईँलाई यो 'श' अर्थात् 'स' ले छोडेको हुँदैन । हुन त 'श' अर्थात् 'स' को महिमा हजारौँ मुख भएको शेषनागले त गर्न सक्दैन भने म सुक्ष्म जीवले त के सुकुला र - हुन त भाषाविद्हरूले जानेरै नै 'श' लाई तीन प्रकारमा श ष स पारेका रहेछन् । किनभने तीनवटै श एउटैभएको भए त यो संसारमा मात्र हैन सौर मण्डल , सम्पूर्ण बद्म्राण्डमा नै 'श' अर्थात् 'स' को साम्राज्य फैलन्थ्यो होला । प्रकृतिको सम्पूर्ण सजीव वस्तुमा सजिएको छ 'श' अर्थात् 'स' शायद तपाईँ विश्वास गर्नूहुन्न होला संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली सम्पत्ति हो भनेर । तर म त विश्वास गर्छु किनभने जहाँ सम्पत्ति छ त्यहाँ शक्ति छ । तपाईँसँग सम्पत्ति छैन भने तपाइँको श्रीमान वा श्रीमती सासूससुरा साढुभाइ सालासाली यहाँ सम्मकी गाँस बाँस कपासले पनि तपाईँलाई छोडर हिँडने छ अनि कसरी हुनु भयो तपाईँ सग्लो सिगो सजीव मानव - र्सवशक्तिमान, र्सर्वेर्सवा, सर्वोच्व, सम्पूर्ण संलग्नता रहेको सम्माननीय 'श' अर्थात् 'स' को साम्राज्य कहाँ कहाँ फैलिएको छैन भनी तपार्इँ सम्झना गर्नुहोस् अनि संकोच नमानी र्समर्थन गर्नुहोस् मेरो तर्कलार्इ। । 'श' अर्थात् 'स' ले भगवान शंकर, सरस्वती, सन्तोषी, साबित्री, सबैलाई आफ्नो बशमा पारेको छ । समाजमा रहेको संस्कृति साहित्य, संस्कार, सबैलाई गा“जेको छ 'श' अर्थात् 'स' ले । साहित्यकार कालिदासको शकुन्तला देखि लिएर सरुभक्तको स प्रतिको प्रेमसम्म फैलिएको छ 'श' अर्थात् 'स' को साम्राज्य स्वास्नीलाई दास सम्झेर सातफेराको सुत्रलाई सुहागरातको सुखभोगको सोपानपछि सम्पूर्ण सम्बन्ध नै समाप्त पार्ने स्वाँठदेखि लिएर स्त्रीको सम्झनामा सम्पूर्ण स्वभाव नै बदेलर संवेदनशील हुने पुरुषहरूप्रति संप्रेषित छ 'श' अर्थात् 'स' । आफ्नो सीमित आयलाई सम्पन्नता, शालिनता र सक्षमता देखाउन सप्तकोशीको पानी बगेझैं सम्पत्ति बगाउनेहरू स“ग सहनुभुति जागेर आउ“छ मलाई । आफ्नो संन्तानका भविष्य बारे संवेदनशील नभई तास, रक्सी, सुरा र सुन्दरीमा फसेर सम्पत्ति स्वाहा पार्नेहरूलाई 'श' अर्थात् 'स' को महिमा सुनाउन मन लाग्छ मलाई ।
आदरणीय पाठकवृन्द, सौर्न्दर्यले सजिएको शहाजहाँकी श्रीमतीको स्मृतिमा सम्पन्न गरिएको ताजमहलदेखि विश्व प्रसिद्ध पेरिसको आइफल टावर जस्तै सुन्दर छ 'श' अर्थात् 'स' को महिमा षेाडसी श्रृगारले सम्पन्न भएकी सुन्दरी जस्तै सुन्दर र साबित्री जस्तै शुद्ध र सत्य छ 'श' अर्थात् 'स'। जहाँ सत्य छ , त्यहाँ शान्ति छ, स्थिरता छ , सदविचार, सदभावना, सहयोग र सतकर्म अवश्य नै हुन्छ भनेर तपाई“ले स्वीकार गर्नै पर्छ । अनि सत्यम् शिवम् सुन्दरम्को मन्त्रमा यो संसार अडेको छ भन्ने कुरामा तपाईँले विश्वास गर्नै पर्छ । अब भन्नुहोस, तपाईँको जीवन पनि शान्त, सुन्दर र र्सार्थक र्पान 'श' अर्थात् 'स' को महिमा गाउनै पर्छ कि पर्दैन - 'श' अर्थात् 'स' ले सडकदेखि सदनसम्म तानेको छ । अनि सडकदेखि सदन पुगेका र गाउ“ देखि सहर पुगेका र्सवशक्तिमानहरूले घुसले नअघाएर जुससम्म खाँदा त्यसमा संलग्न हुने सहयोगीहरू सीमित स्वादमा शान्त हुन्छन् भन्ने कुरा सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन होला - सवुत प्रमाण सहित प्रमाणित भएर भ्रष्टाचारी सावित भएका ती र्सवशक्तिमानलाई कसले शीतल सान्तावना दिने त -
पाठकवृन्द, मैले 'श' अर्थात् 'स' को महिमा यथाशक्ति जेताभक्ति भनेझैं मैले आफ्नो सामर्थले भ्याएसम्म गाइसकेको छु । अन्तमा पनि म 'श' को महिमा गाएरै समाप्त गर्दैछु । यदि 'श' अर्थात् 'स'
नभएको भए तपाईँको सामु म यो सबै संप्रेषित गर्न सक्दिनथेँ हुलाँ । सात पल्टसम्म खेस्रा तयार पारेर मात्र सम्पन्न भएको यो महिमा सकुन्जेल सम्म पनि म 'श' अर्थात् 'स' को दासताबाट मुक्त हुन सकिनँ । त्यसैले पनि होला यो पुस्तकको शीषर्क पनि स बाट उठ्न गई सिर्जना र सन्त्रास रहन गयो । हुन पनि हो मेरा सिर्जनाहरू सन्त्रासमा नै त बाचेका छन् । यसमा भएका मेरा सिर्जनाले गरेका घोचपेचले म स्वयं पनि सन्त्रासमा त छु नि † तर मलाई त्यो सन्त्रासबाट पनि 'श' अर्थात् 'स'को महिमाले मुक्त गराउने छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दछु । त्यसैले आउनुहोस म अर्थात् म र त अर्थात् तपाईँ भएर एकपल्ट फेरि श अर्थात् सको महिमालाई जय भनौँ ।
हामीभित्रको जीवन रोइरहेको थियो
5:12 AM संस्मरण
जन्मदा हामी सबै रोइरहेका हुन्छौँ किनभने हामीभित्रको मृत्युले हामीलाई रुवाइरहेको हुन्छ । जीवनको विजयमा मृत्यु रोइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा । तर उपस्थित हामी सबै हाँसिरहेका हुन्छौँ । जब जीवनको पराजय हुन्छ मृत्युको विजय हुन्छ तब हामीभित्रको मृत्यु हाम्रो लाशमाथि हाँसिरहेको हुन्छ । तर उपस्थित हामी रोइरहेका हुन्छौँ। जीवन र मृत्युको यो खेल निरन्तर चलिआएको छ । यो खेलको अगाडि समय कति निरङ्कुश भयो - बि. स. २०६५-७- २४ गते साझ ४ बजेतिर पशुपतिको आर्यघाटमा । साँच्चै मृत्यु हाँसिरहेको थियो शारदा अधिकारीको लासमाथि । हामीलाई एउटा नयाँ अध्यायको चुनौति दिइरहेको थियो । हामी स्तव्ध थियौँ भावविहीन र आत्माविहीन भएर । हामीभित्रको जीवन रोइरहेको थियो शारदा अधिकारीको मृत्युको यो निरङ्कुश खेलमा ।
भर्खर अमेरिकामा राष्ट्रपति ओवामाले चुनाव जितेको विजयी माहौलमा रङ्गिएको नेपाल बालसाहित्य समाजको चुनावी माहौल । चुनाव आखिर चुनाव नै हुन्छ । सबैलाई आफ्नो गुट, आफ्नो पार्टीलाई जिताउन जोडतोडका साथ तयारी र कटिबद्धता । यस्तै कटिवद्धताका क्रममा उहाँ तेजप्रकाश श्रेष्ठसग रमेश विकलको घर जाँदै हुनुहुन्थ्यो । घाँटीमा बाँधेको सल मोटरसाइकलको पङ्ग्रामा अल्झेर उहाँको मृत्यु भएको थियो । हाम्रो जीवन धेरै भागमा बाँडिएको हुन्छ । जति नै भागमा बाँडिए पनि त्यहाँ हामी पराजयको स्थान शून्य देख्छौँ । जीवनको आफ्नै चक्र हुन्छ । त्यो चक्रले पराजयलाई कहिल्यै स्वीकार गर्दैन । जीवन जित्ने लालसामा मान्छे पराजयको आभाषसम्म पनि लिन चाहँदैन । ऊ पराजयको सङ्केतले मात्र पनि तर्सन्छ र सम्पूर्ण शक्ति र सीप प्रयोग गरेर विजयीको सपना बोकेर उडिरहेको हुन्छ । तर उसलाई थाहा हुँदैन ती सपनारूपी चङ्गाको धागो मृत्युको नियन्त्रणमा हुन्छ भनेर । केही मिनेट, केही सेकेण्डमा ती सपनाहरू ब्रद्माण्डमा विलीन हुनसक्दछन् । तर पनि हामी प्रत्येक पल प्रत्येक क्षेत्रमा विजयको लागि मृत्युसँग सङ्धर्षगरिरहेका हुन्छौँ । जीवन बाँच्ने क्रममा आज यस्तै एउटा सङ्धर्षील नारीको जीवनमा मृत्युको विजय भएको थियो जसले जीवनमा कहिल्यै हार्न जानेको थिएन । हिजोसम्म धेरै सपना बोकेर हि“डेका जीवन आज सपनाविहीन भएर शून्यमा बिलाएको थियो । अतीतको गर्तमा भासिँदै गएको थियो । कल्पना नै नगरेको कुरालाई मृत्युले कति सजिलै साक्षात्कार गराइदिएको थियो हाम्रो आँखामा । त्यसैले ऊ अट्टहास लिएर हाँसिरहेको थियो त्यस आलाङ्कारिक उत्सवमा । यो अकल्पनिय घटना केही घण्टा अघिसम्म हामी कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ शारदा अधिकारीलाई यसरी आर्यघाटमा विदा गर्दै छौ भनेर । समय कति क्रुर भइदियो हामी सबैका लागि । केही घण्टामा नै यो सब भयो । पराजय आखिर पराजय नै हुन्छ । शारदा अधिकारीको जीवन पराजय भएको थियो मृत्युको अनौठो खेलमा । उहाँको पार्थिव शरिर आर्यघाटको चिसो भुइँमा लडिरहेको थियो । हिजोसम्म आफ्नो अस्तित्त्व, आत्मास्वाभिमान र अस्मिताको रक्षाका लागि सक्रिय हातखुट्टाहरू आज निस्क्रय थिए । वौद्धिकताका लर्डाई लडिरहने मस्तिष्क शून्य थिए । आज मृत्युको विजयमा ती अवयवहरू लाचार र विवश थिए । उहाँका निर्जीव शरिरझै हामी पनि भावशून्य थियौँ । हामी उहाँको विवशतामा आँसु बगाउन सिवाय केही गर्न सक्दैन थियौँ । हामीभित्रको जीवन रोइरहेको थियो त्यस क्षणमा । म शारदा अधिकारीको मृत्युमा रोएकी थिइनँ मात्र मभित्रको जीवन रोइरहेको थियो उहाँको जीवनको पराजयमा । उहाँको एकलौती छोरी अद्धचेतन अवस्थामा थिइन् । उनलाई लाग्दथ्यो होला- मेरी आमा अहिले आर्यघाटबाट उठेर 'छोरी किन रुवेकी मलाई केही भएकै छैन ' भन्नेछिन् भनेर । तर यथार्थ अर्कै थियो । यथार्थ भोग्नेको अवस्था अत्यन्तै हृदयविदारक थियो । केही क्षणपछि मृत्युले आगोको हुँकार लिदै उहाँको पार्थिक शरिरलाई समाप्त पारिदियो । हामी निशब्द उहा“का विगतका चलचित्रहरू आँखामा पदार्पण गर्न विवश थियौँ । कतै यो सपना पो हो कि - कतै यो फिल्मको जस्तो कथा पो हो कि - अविश्वासले विश्वासलाई जितिरहेको थियो । काल्पनिक कुरा विश्वास गर्न त समय लाग्छ भने यो अकाल्पनिक कुरा कसरी विश्वास गर्नू । सायद समयलाई पनि धेरै समय खर्च गर्नुपर्नेछ विश्वासलाई जिताउन । किनभने एउटा शक्तिशाली अध्यायलाई उसले सधैको लागि बन्द गदै छ - कहिले नउघ्रिनेगरी । त्यसैले उसले धेरै शक्ति र परिश्रम खर्च गर्नुपर्नेछ ।
साँच्चै धेरै शक्ति र समय खर्च गर्नु पर्यो यो यथार्थ स्वीकार गर्नलाई । आजभन्दा केही वर्षघि उहाँहरू साझाप्रकाशनको कार्यक्रम लिएर खरसाङ् जानुहुँदा जीप दुर्घटनामा साहित्यकार विनय रावलको मृत्यु हुँदा लेख्नुभएको संस्मरण पढेको मलाई हिजै जस्तो लाग्छ । तर समयले कति घोर अन्याय गर्यो, यति चाँडै उहाँको दुर्घटनालाई शब्दमा अंकित गर्नुपर्ने सजाय दियो मलाई । एउटा सङ्धर्षील, बौद्धिक, आत्मस्वाभिमानी नारीको देह शरीर यो ब्रद्माण्डमा विलीन हुँदै छ । त्यसै पनि नेपाली साहित्यिक क्षेत्र बौद्धिक र प्रतिभावान नारीको ठूलोखडेरी परेको क्षेत्रले उहाँको अभावलाई कसरी परिपूर्ति गर्ला यो क्षेत्रले -
यति थोरै समयमा उहाँले दिनुभएको साहित्यिक योगदानलाई राष्ट्रले कसरी सम्झेला - सायद राष्ट्रले पनि धेरै परिश्रम गर्नुपर्नेछ अर्को शारदा अधिकारी जन्माउन । राष्ट्रले छोटो आयूमा साहित्यिक प्रतिभावान व्यक्ति गुमाउनु परेको पीडा फेरि एकपल्ट बोक्नुपर्यो । छोटो आयूमा गुमाएका साहित्यिक व्यक्तित्त्वहरू मोतीराम भट्ट, पारिजात, हरिभक्त कटुवाल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, शङ्कर लामिछानेको इतिहासमा समयले एउटा अर्को इतिहास कोरिदिएको छ -शारदा अधिकारीको नाममा ।
म मोफसलको मान्छे तर काठमाडौको साहित्यिक माहौललाई नजिकबाट हेर्ने गर्दथे । यसैक्रमा शारदा अधिकारीको नाम पढिरहने मौका पाएकी थिएँ। मेरो पहिलो पुस्तक सानीले साझा बालसाहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्दा पुरस्कार ग्रहण गर्ने समय पार्क भिलेज रिर्र्सोटमा शारदा अधिकारीजीसँग मेरो पहिलो भेट भएको थियो । कसैले मलाई सोध्यो 'उहाँलाई चिन्नुहुन्छ -' मैले भने 'अ“, चिन्छु शारदा अधिकारी हो साझाको संचालक समितिमा पनि हुनुहुन्छ ।' उहाँले 'हो' भन्नुभयो । त्यसपछि नेपाल बालसाहित्य समाजको आजीवन सदस्य लिन म उहाँको घर गएकी थिएँ । उहाँबाट अत्यन्त आत्मीय व्यवहार प्राप्त गर्न पाएँ । त्यसबेला उहाँलेृ मलाई भन्नुभयो 'तपाईँलाई साझाबाल साहित्य पुरस्कार दिने बेलामा विवाद भयो । एउटै पुस्तकमात्र लेखेकोलाई कसरी दिने भनेर । मैले तपाईँले नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड गरे ।' यो कुराले मेरो उहाँप्रतिको सदासयता चुलिँदै गयो र वास्तवमा हो पनि एउटै पनि लेख रचना प्रकाशित नभएको मान्छे एउटै पुस्तकमा साझा बालसाहित्यजस्तो गरिमामय पुरस्कार पाउनु कम चानचुने कुरा थिएन । मेरो जीवनमा यो सबैभन्दा खुसीको क्षण थियो । मेरो जीवनमा सत्यको ठूलो जीत थियो । त्यो सत्यर् इश्वरको रूपमा शारदा अधिकारीको आत्मामा बसेको रहेछ । किनभने त्यो पुरस्कार पाएपछि मलाई साहित्य लेखन सहज बन्नको साथै हौसला र प्रेरणा पनि प्राप्त हुँदै गयो । त्यसपछि त्यसको दोस्रो भाग लेखे“ । त्यसले पनि अन्तरार्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सर्वोत्कृष्ट नारी हस्ताक्षर पुरस्कार प्राप्त गर्यो । पुरस्कार प्राप्त गर्नु ठूलो कुरा थिएन ती दुवै पुस्तकलाई पढ्ने जतिले अत्यन्त राम्रो मानिदिनु भएको थियो । त्यो पुरस्कार प्राप्त नगरेको भए आज म साहित्यिक क्षेत्रमा यसरी समर्पित नहुन पनि सक्थे । साँच्चै मैले नढाटी भन्नुपर्दा शारदा अधिकारीले आफूपछि एउटा उत्तराधिकारी जन्माएर जानुभएको रहेछ बालसाहित्यिक क्षेत्रमा । किनभने जब म लामोसमयदेखि खाइ रहेको स्तरीय जागिर छोडेर यसै क्षेत्रमा समर्पित हुन काठमाडौ आइपुगेँ तब शारदा अधिकारीले हामी सबैलाई छोडेर जानुभयो । अहिले मलाई लाग्छ शारदा अधिकारीले बालसाहित्य क्षेत्रको विकासको लागि देख्नु भएको सपना मैले देख्नु पर्छ ।
त्यसपछि उहाँसँग मेरो त्यति धेरै सन्निध्यता रहेन तर पनि मेरो हृदयमा उहाँ एउटा सङ्धर्षील, वौद्धिक र क्रान्तिकारी नारीका रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्दथे । किनभने साहित्यिक क्षेत्रमा लागेर यति सफलता पाउन नारीलाई धेरै साधाना र तपस्या गनुपर्छ भन्ने मैले पनि अनुभव बटुलेकी छु । त्यसै पनि एकल नारीले कति धेरै सङ्धषर्, त्याग, साधना गर्नुभएको थियो होला । अहिले कल्पनामात्र गर्न सक्छौ किनभने यथार्थ उहाँसँग अतीतको कुहिरोभित्र हराइसकेको छ । उहाँले साझा प्रकाशनमा दिनुभएको योगदान र लामो समयसम्म नेपाल बालसाहित्य समाजका लागि दिनुभएको योगदान अविस्मरणीय भएर रहने छन् । त्यस्तै साहित्यिक सिर्जनाको छुट्टै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुभएको सेवालाई बैग्लै अध्ययन गर्न सकिन्छ । आफ्नो घरपरिवार बीचमात्र सीमित रहने नेपाली नारीको भीडमा एउटा बेग्लै अस्तित्त्व र पहिचान बनाएर बाँच्न सफल शारदा अधिकारी -ढकाल) नेपाली साहित्यिक आकाशमा कहिल्यै नअस्ताउने तारा भएर बाँचिरहनु हुनेछ । उहाँको आत्माको चीर शान्तिका लागि म भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्दछौ ।
बालसाहित्यमा शर्मिलाको क्रियाशीलताः सर्न्दर्भ उपन्यास र एकाङ्कीको
6:09 AM समालोचना
कथा, कविता र केही विचारप्रधान लेखहरूबाट नेपाली भाषा र साहित्यमा प्रवेश गरेकी शर्मिला खड्का -दाहाल-२०२३) पहिलो बाल उपन्यास सानी-२०६०) देखि बालसाहित्यमा क्रियाशील देखिएकी छन् । प्रवेशकालमै पहिलो उपन्यासले नै साझा बालसाहित्य पुरस्कार प्राप्त भएबाट पनि उनमा क्रियाशीलताको प्रेरणा प्राप्त भएको देखिन्छ । सानी उपन्यासको दोस्रो भाग सानीको साहस-२०६३) ले समेत अन्तर्राष्ट्रय नेपाली समाजको सर्वोत्कृष्ट नारी हस्ताक्षर सन् २००७ प्राप्त हुनाबाट शर्मिलामा बालसाहित्य लेखन र प्रकाशनमा ऊर्जा थपिएको पाइन्छ । परिणमतः बालसाहित्यका करिब एक दर्जन पुस्तकहरू प्रकाशित र प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेका देखिन्छन् । बालसाहित्यका विधागत विविधतालाई समेट्ने उनको प्रयासपनि उत्तिकै सकारात्मक हुन पुगेको छ । सानी, सानीको साहस, सिन्केको सफलता, मित्रताको महत्व, आदि प्रकाशित भइसकेका बाल उपन्यास हुन भने साने बन्यो शान्तबहादुर, सुरिया र भकुल्ले,स्वणिर्मा तथा सुइरे र भुइँफुट्टे हास्यात्मक बालउपन्यास प्रकाशनका तयारीमा रहेको बुझिएको छ । त्यसैगरी बालएकाङ्कीसंग्रह उज्यालो बाटो शिक्षाको कृतिहरूले शर्मिलाको सिर्जनशील व्यक्तित्वलाई प्रकाशित गरेका छन् । यसरी बालसाहित्यमा शर्मिलाका हस्ताक्षरबाट यस क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखा परेको छ ।
१.१ बालसाहित्यः परिचय र आवश्यकताः
विभिन्न आधारमा सहित्यको वर्गीकरण गरिने सर्न्दर्भमा सृजन तथा पठन, पाठकीय केन्द्र वा लक्षित समूहका आधारमा साहित्यलाई बालसाहित्य र साहित्य -प्रौढ) गरी दुइ शाखामा राख्ने गरिन्छ । अङ्गे्रजीमा राइटिङ्ग फर चिल्ड्रन वा चिल्डे्रन्स बुक भन्ने नाममा बालसहित्यलाई बुझने गरिन्छ । नेपालीमाचाहिँ बालसाहित्य नाममा दुई अर्थलाई लिने गरिन्छ । बालबालिकाका लागि साहित्य र बालबालिकाद्धारा लिखित साहित्य । अहिले चलचित्र, मूर्तिकला, चित्रकलाका कला बालबालिकालाई बालकलाकार र बालबालिकाका पत्रकारितलाई बालपत्रकारिता भनिँदैछ भने बालबालिकाद्धारा लेखिएका साहित्यलाई र बालबालिकाका लागि लेखिएको साहित्यका बीच विभेदक अर्को नाम अझै जुरिसकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा अहिले बालबालिकाका मानसिक र बौद्धिक क्षमताका अत्तिरिक्त विस्तारका लागि तदनुकुल शैलीमा लिखित साहित्यलाई मात्र बालसाहित्य भनिन्छ । यस अनुसार बालसाहित्य बालबालिकाका लागि अत्तिरिक्त सामग्री हो, पथ्य खुराक हो, औपचारिक पाठ्यसामग्री होइन । पाठ्य सामग्री तथ्याकत शैलीमा सूच्य एवं सीमित हुन्छ भने बालसाहित्यचाहिँ तिनै तथ्यमा आधारित रहेरपनि त्यसका असीमित सम्भावनालाई र समय रोचक ढाँचामा प्रस्तुत गरिने हुन्छ पाठ्यपुस्तकका सँसारभन्दा बाहिर बालपुस्तकको अर्कै संसार पनि छ र बन्ध-२०४८ः२) यसैले बालबालिकाहरूमा पठनकार्यप्रति अभिरुचि जागृत गर्न, विचारशक्तिको परिवर्द्धन गर्न , शब्द भन्डारलाई विस्तार गर्न एवं जीवन र जगत्का बहुमूल्य ज्ञानको अभिवृद्धि गरी रचनात्मक दष्टिकोणको परिवर्द्धन गर्न पनि बालसाहित्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहने तथ्य निर्विवाद छ प्रधान २०६१ः२७) । अहिले ज्ञानको क्षेत्र वयस्क र प्रौढहरूका लागि फराकिँदै जाँदैछ भने बालबालिकाका लागि विश्व साँघुरिएको छ । उनीहरू यन्त्रमानव बनाउँदै गएका देखिन्छन् । खास गरेर अङ्ग्रजी माध्यममा आफ्नो सन्तानलाई पढाउन अभिभावकहरूको तीव्र अभिलाषा र विद्यालयहरूमा नेपाली बोल्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको स्थिति तथ आधुनिक गुणस्तरीय ज्ञानका नाममा बढ्दो विदेशी सभ्यता र संस्कृतिर्फ अभिमुख गर्ने वर्तमान शिक्षा प्रणालीका सांस्कृतिक दासत्वले गर्दा बालबालिकाका जिज्ञासाहरू नेपाली समाजका प्रतिकुल भइरहेका छन् भने यान्त्रिक परनिर्भरता समेतले उनीहरूका सिर्जनशीलतामा सीमा लगाएको छ । नेपालको यस जटिल विसङगत परिस्थितिबाट बालबालिकाका सम्भावनालाई जोगाइराख्न अत्तिरिक्त पूरक सामग्रीका रूपमा बालसाहित्यको अनिवार्यता देखिन्छ । यस्तो साहित्य कोमल संवेदनाले भरिएका र बालबालिकासँगका सान्निध्यमा रहेर उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेकाले मात्र लेख्न सक्छन् । बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझने क्षमता प्रकृतिले महिलालाई बढीदिएको छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा केही समय उनीहरूकै सामीप्यमा शिक्षण पेशामा संलग्न शर्मिलालाई सहजत छँदै थियो । त्यसबाट उद्बुद्ध संवेदनालाई अभिव्यक्त गर्न बालसाहित्यमा प्रवेश गर्दै निरन्तरता दिनु हाम्रा बालबालिकाका लागि सुखदसमेत भएको छ ।
१.२ बालसाहित्यको विद्यागत प्रसङ्गः
साहित्यका विद्याहरूजस्तै बालसाहित्यमा पनि अनेक विद्या विकसित हुँदै गएका छन् ः बाललोकगीत, शिशुगीत, बालकविता, बाललोककथा, बालकथा, बालउपन्यास बालनाटक, एकाङ्की आदि, शर्मिलाले कविता, कथा, उपन्यास र एकाङ्की गरी चार विद्यामा हस्ताक्षर गरेपनि प्रस्तुत प्रसङ्गलाई दुई विद्यामा केन्द्रित गरिएको छ ः बालउपन्यास र बालएकाङ्की । यस चर्चामा परेका दुई विद्याका कृतिहरू यी हुन् ः बालउपन्यासमा सानी, सानीको साहस, मित्रताको महत्व र सिन्केको सफलता एवं बालएकाङ्की संग्रगहमा उज्यालो बाटो शिक्षको आदि हुन् ।
१.३ बालउपन्यास परम्परामा शर्मिलाको उपस्थिति र उनका उपन्यासहरूः
शर्मिलाको बालउपन्यासकारिताको स्थान निर्धारण गर्न यहाँ संक्षेपमा बालउपन्यास परम्पराको र्सवेक्षण गरिएको छ । यसपछि उनका उपन्यासहरूको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
१.४ बालउपन्यास परम्पराः
बन्धुु-२०४२ः२९) ले दिएका जानकारी अनुसार हरिहरनाथ रेग्मीद्धारा लिखित युरोपेली उपन्यासको कथासार-२०१५) पहिलो बालउपन्यास देखिएको छ । जसमा युरोपका केही उपन्यासको कथा संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसपछि चन्द्रबहादुर थापाको छोटकरी रामायण-२०२१), प्रकाश कोविदको बालरामायण-२०२२), कविता शशिको सरल बालरामायण-२०२८) देखिएका छन् । तर यी सबै मौलिक भएर पुनः कथन मात्र भएकाले-प्रधान २०६१ः१०८) पहिलो नेपाली बालउपन्यास भद्र थापा सावीको सानु-२०२२) मानिएको छ । तथापि यो अप्राप्य भएकोले शङ्कर कोइरालाको नदी गीत गाउँछ-२०२८) ले पहिलो प्राप्य नेपाली बालउपन्यास हुने अवसर पाएपनि विशृङ्खलित कथावस्तु, अनेक पात्रपात्राको जमघट, बालबालिकाका मानसिक स्तरभन्दा माथिल्लो तहको जटिल चरित्र र स्तर अनुकुल भाषा नभएकाले यो आंशिक बालउपन्यास हुन पग्यो -पराजुली २०५८ः२३) । त्यसैैले प्रधान-२०६१ः१०९) ले २०२९ मा प्रकाशित शेष मानन्धरको सिरूकी बाख्री र अन्जनादेवी भट्टर्राईको रामु र श्यामुको बहादुरी लाई प्रथम दुई बालउपन्यास मानेका हुन । यस क्रममा कवितारामको वनदेवी-२०३६), पानीको थोपा-२०३८), कमिलाको कथा-२०४८), अनौठो यात्रा-२०५८), मालीको यात्रा-२०५९), रमेश विकलको विक्रम र नौलो ग्रह-२०३९), मोदनाथ प्रश्रतिको चोर-२०४३), गोपाल पराजुलीको एकदिनको यात्रा-२०५८),कार्तिकेय घिमिरेको भूतराज-२०५८), डरलग्दो राक्षसको खोजी-२०५८), अचम्मको देश-२०५९), विजय चालिसेको मङ्गल ग्रहमा विज्ञान-२०६०) जस्ता डेढ दर्जन बालउपन्यासहरूको प्रकाशक परम्परामा सानी-२०६०) मा शर्मिलाको उपस्थिति देखिन्छ । बालउपन्यास लेख्ने महिलाहरूमा अञ्जनादेवी भट्टर्राई, प्रेमा शाह, कल्पना प्रधान, रञ्जुश्री पराजुली, जलेश्वरी श्रेष्ठ, लक्ष्मी उप्रेतीहरूका क्रममा सातौँ महिला उपन्यासलेखिकाका रूपमा शर्मिलाको स्थान निर्धारित भएको छ । यसभन्दा पनि नेवपाली बालसाहित्यमा धारावाहिक उपन्यास लेखिकामा प्रथम स्थान लिने शर्मिला नै देखिएकी छन् ।
यहाँ उनका प्रकाशित चार बालउपन्यासको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छःः-
२०६० को साझा बालसाहित्य पुरस्कार प्राप्त शर्मिलाको पहिलो बालउपन्यास सानी का तीन संस्करणमा आठ हजार प्रतिहरू बिक्री भइसकेको देखिनाले उपन्यासको लोकप्रियता प्रमाणित भइसकेको छ । दश परिच्छेदका वा शिर्षकहरूमा संगठित यो उपन्यास एक्काईस पृष्ठभित्र मुद्रित छ । बढीमा चार पृष्ठसम्मका सबै परिच्छेदहरू सचित्र छन् । चिल्लो आकर्ष गाता राम्रो कागतले पनि पुस्तक बालबालिकाका लागि आर्कषित भएको छ । यसरी साजसज्जाका बाह्यकता पक्षमा सानीको सौर्न्दर्य प्रकटित भएको छ ।
सात-आठ वर्षी सानीको आमाको मृत्यु सानैमा भएकाले अज्ञानी सानीलाई आमाका वात्सल्यको अभाव खट्कनु स्वभाविकै हो । त्यो अभाव पूरा गर्न बुबाले अर्को विहे गर्दछन् । नयाँ मम्मीबाट वात्सल्य पाउँदा-पाउँदै बुबाको सरुवा भएकाले विछोड हुँदा चिन्तित सानी विरामी पर्छे यो बालमनोविज्ञान अनुकूलको घटना हो । सानीको अस्वस्थताका कारण बुबासँगै मम्मी घर फर्किएपछि सानी निको हुन्छे । यसरी छोटा कथानकमा संरचित यस उपन्यासले बालबालिकाका लागि आमाको महत्व दर्सन्छ । र सानीका चरित्रबाट आफूभन्दा ठूलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने सन्देश दिइएको छ ।
ख्ा) सानीको साहस-२०६३
सानीको दोस्रो भाग सानीको साहस पनि दुवैसालमा दर्ुइ संस्करणमा ३५०० प्रतिहरू विक्री भइसकेको र अन्तर्राष् ट्रय सर्वोष्कृष्ट नारी हस्ताक्षर सम्मान-२००७ प्राप्त गरेको उपन्यास हो । सानी जस्तै सुन्दर साजसज्जामा आएको यस दोस्रो बालउपन्यासको थप पक्ष भनेको पुस्तकका अन्तमा बालबालिकाबाट पाठक प्रतिक्रिया माँगिनु हो । यसबाट पनि पुस्तक उपयोगी बन्दै गएको बुझिन्छ ।
सानी पहिलेभन्दा ठूली हुँदै गएकीले होला पुस्तकका आकारमा पनि वृद्धि भएको छ । यसमा ७७ पृष्ठ र २६ परिच्छेद वा शीर्षकहरू छन् । यो केही ठूलो भएजस्तो देखिन्छ ।
· निको भएकी सानीकी वुवा र मम्मीसँगै काठमाडौँ जाँदा रात्रिबसमा भएको डकैती, सहरका चोरी, फोहोर, धनी-गरिब, गाउँले-सहरियामा हुने असमानताहरू बोर्डिङ् स्कुलमा नेपाली भाषाप्रतिको उपेक्षा लगायत दशैँ, छाउपडी प्रथा, गरूपूणिर्मा, माओवादी जनयुद्ध कालका अपहरण र सैनिक भिडन्त जस्ता कुराको अनुभव गर्छे यस्ता कुराबाट बालबालिकामा आफ्ना भाषा र संस्कृत्रि्रतिको प्रेम र समसामयिक ज्ञान दिा ओजिएको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यस उपन्यासको अर्को उल्लेखनीय पक्ष पराशक्ति मानिएको तन्त्रमन्त्रप्रतिको विश्वास हो यस उत्तरआधुनिक विज्ञान र प्रविधिको यथार्थवादी युगमा मध्यकालीन उपन्यासमा जस्तै जादु, तन्त्रमन्त्रको प्रयोग गरिनाले तिनीहरूबाट बालबालिकामा अन्धविश्वास बढ्ने हुँदा प्रगतिवादी समालोचकउहरू जस्ता सामग्रीका प्रयोगको निषेध गर्दछन् । तर रमेश विकल यस्ता प्रयोगबाट बालबालिकामा कल्पनाशक्तिका विकासमा सहयोग हुने ठान्दछन् । यहाँ शर्मिलाले सचेत रूपमै यस्तो प्रयोग गरेको बुझिन्छ । बालबालिकाहरू यथार्थपरका काल्पनिक कुरा रुचाउँछन् । कल्पनाबाट उनीहरू उत्तेजितपनि हुने गर्दछन् । उपन्यासमा बेलाबेलामा शान्तिमाता र अशान्तिमाता प्रकट भएर सानीलाई आफूतर्फ आकषिर्त गर्न खोज्छन् । यी काल्पनिक माताहरू हामीभित्रै उब्जने नराम्रा भावनाहरू हुन् । समय, ठाउँ वा अवस्थाले. अशान्ति माताको विजय हुन्छ । यहाँ औतारी बाघमुखे बाबाका प्रसङ्गबाट जन्म-जन्मान्तरप्रति पनि विश्वास गरिएको छ । सत्यर्साईबाबा, उनका पर्ूवजन्मका सिरडीर्साई बाबा र अब आउने प्रेम र्साई समेतका सर्न्दर्भले गर्दा पूर्वजन्म मिथ्या होइन भन्ने लेखिकाको विश्वास हो । विश्वास विश्वासै हो, सबैबाट आ-आफ्नै विश्वासका आधारहरू हुन्छन् । जे भएपनि, यस्ता प्रसङ्गहरूले सानीको साहसमा रोमाञ्चकता, कौतूहल र मनोरञ्जानत्मक ल्याएर पठनीय बनाउनमा सहयोग गरेका छन् । त्यसैले पस्तुत बालउपन्यास पठनीय र प्रिय हुन पुगेको हो खास गरेर बालबालिकामा आत्मविश्वास बढाउन र असल सोच भयो भने अन्यशक्ति वा परिस्थिति ले पनि साथ दिन्छ भन्ने भावना जागृत गर्न सानीको साहस उपयोगी बालउपन्यास भएको पाइन्छ । यसैले यसको विक्री राम्ररी सम्भव भएको हो ।
ग) सिन्केको सफलता-२०६४
शर्मिलाको तेस्रो बालउपन्यास सिन्केको सफलता समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित छ । माओवादी जनयुद्धताका भोजपुरका भिडन्तमा आमाबाबु राज्यका सैनिकद्धारा मारिएपछि अनाथ भएका सिन्केले मावल पुगेरपनि सुख पाउँदैन । मामा उसलाई नोकर बनाएर मात्र राख्न खोज्दै अनेक मानसिक प्रताडना दिन्छन् । सिन्के त्यहाँबाट निस्किएर होटलमा श्रम गर्न थाल्दा सिन्केको यस अवस्थाले सहरका होटलहरूमा काम गर्ने बालकहरूको परिचय दिएको छ । होटलमा काम गर्दा-गर्दै एकजना धनी मानिससँग उसको सर्म्पर्क हुन्छ । त्यस धनी मान्छेकी पत्नी छोरो कृष्ण हराएकामा अर्ध-विक्षिप्त भएकी हुँदा उसलाई स्वास्थ बनाउन कृष्णका रूपमा घर लगेर धर्मपुत्रका रूपमा पाल्न थाल्दछ । सिन्केलाई आफ्नो छोरो कृष्ण भन्ने ठानेर आमा पनि स्वस्थ हुँदै जान्छिन् । उता स्कुल पढ्न थालेको सिन्केचाहिँ कृष्ण हराएको कारण पत्ता लगाएर उसलाई घर फर्काउन कम्प्यूटर, रोबोट आदिको प्रयोग उपयोग गर्दै सिन्के पृथ्वीलाई नै बचाउने प्रयासमा क्रियाशील हुन्छ । यसरी तेस्रो बालउपन्यासमा निरन्तर क्रियाशील हुन र वैज्ञानक शिक्षा दिन उपयोगी भएको देखिन्छ ।
घ) मित्रताको महत्व-२०६४
दुइ मानवीय पात्र मबहादुर र हामीबहादुर तथा दुई मानवेतर पात्र भ्यागुतो र कछुवाको प्रयोग भएको मित्रताको महत्वमा मित्रता र दीगो विकासका अवधारणालाई सरल शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । नाम अनुसार मबहादुर स्वार्थी छ, क्षणिक प्राप्तिमा रमाउँछ, त्यसैले ऊ भ्यागुतो जस्तै कुवाको व्याङ हो । तर हामीबहादुरमा सामूहिक भावना छ , ऊ तत्कालिन आनन्दभन्दा दीगो सुख चाहन्छ, त्यसैले ऊ कछुवाजस्तै छ, हामीबहादुर कछुवाका सहयोगमा लामो विकास यात्रामा हिँड्छ । परिणामस्वरूप एकता नामकी केटीसँग विहे भएपछि विकास, प्रगति, सुशिल, विवेक, बुद्धिबहादुर नामका सन्तानहरूजन्मन्छन् । हामीबहादुरलाई समुद्रपारका सभ्य, सुशिक्षित गाउँमा पुर्‍याउन कछुवाले सहयोग गर्दछ । यसरी नीति कथा, अंशतः लोककथा समेतबाट प्रभावित हुँदै समसामयिक विषयवस्तुको आख्यानीकरण, वैज्ञानिक सामग्रीका उपयोगको परिवेश, बालबालिकाकै पात्र प्रस्तुति र सरल बालसुलभ शैलीका कारण शर्मिलालाई सफल बालउपन्यास लेखिकाका रूपमा चिन्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
१.५ बालएकाङ्की परम्परामा शर्मिला र उनको बालएकाङ्की समूहः
व्यवहारवादी मनोविज्ञानम अनुसार बालबालिकामा भाषाप्राप्ति ज्ञानको सिकाइ अनुकरणबाट हुन्छ । साहित्य स्वयंमा जगत् र जीवनको लेखकीय अनुकरण हो भने त्यसको पाठकीय अनुकरण नाटक हो । नाटकमा कायिक, वाचिक, सात्विक र आहार्य चार किसिमले आनुकरण गरिन्छ । बालबालिकाको अनुकरणशीलता र सिर्जनाका प्रकृतिअनुसार एकाङ्की वा नाटकको विकास हुनुपर्ने भएपनि काव्यहरूमध्ये नाटक रम्य मानिएपनि यसमा स्रष्टाले प्रत्यक्ष उपस्थितिको अवसर नपाउने हुँदा प्रस्तुतिमा निकै समस्या हुन्छ । संभवतः यस्ता सीमाले गर्दा नेपाली बालनाट्यलेखन निकैपछि परेको छ ।
रमेश विकलद्धारा लिखित र साझा प्रकाशनबाट २०३७ सालमा प्रकाशित सात थुङ्गा पहिलो बालएकाङ्की संग्रह देखिएको छ । यसपछि गेहेन्द्रमान उदास पोखरेलीको शाहबंशका पाँच प्रमुख राजा -२०४२), विजय चालिसेको बादलका बुट्टाहरूमा -२०५२), सरुभक्तको बालबालिकाहरूका नाटक -२०५३) लगायत करिब एक दर्जनजति मात्र बालनाटक एकाङ्कीका परम्परामा शर्मिलाको उज्यालो बाटो शिक्षाको -२०६४) प्रकाशित भएको छ ।
उज्यालो बाटो शिक्षाको एकाङ्कीहरूको संकलित स्वरूप हो पहिलो एकाङ्की यो कसको पीडा मा बुवा माओवादी सेनामा भर्ना भएपछि कमाएर खुवाउने व्यक्तिका अभावमा बुबा खोज्न जाँदा बम विस्फोटबाट रक्ताम्य भएकी आमाको चित्रण छ । यसरी राज्य र माओवादी दुइ ठूलाबडाका लडाइँमा बालबालिकाले नै पीडा भोग्नु पर्दछ भन्ने कथ्य प्रस्तुत गरिएको छ । दोस्रो एकाङ्की सम्भव-असम्भव मा नेताहरूले नसिकाउँदा अन्धा, नचाहिँदा आश्वासन पाउँदा पाउँदा सुन्नै नसक्ने बहिरा र ढुङ्गामूढा गर्न सिकाइएर लङ्गडा भएका नेपाली जनताका चित्रणद्धारा नेताहरूप्रति मीठो व्यङ्ग्य गरिएको छ । यसको निष्कर्षहोः चुनाव जित्ने क्षणिक र तुच्छ वैयक्तिक स्वार्थका लागि बालबालिकालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसैगरि तेस्रो एकाङ्की हाम्रो दायित्व मा बिग्रिएका बच्चालाई सुधार्न शिक्षकको दायित्व हो भनिएको छ भने चौथो उज्यालो बाटो शिक्षाको एकाङ्कीमा पढ्ने भन्दा नपढ्नेहरूले धेरै पैसा कमाएका छन् भन्ने भ्रान्त धारणाले गर्दा बिग्रिएका केटाले दुःख पाएपछि चेत फिरेको देखाइएको छ । यस्तै जनस्वास्थ्य अदालत एकाङ्कीमा अदालती बहसका शैलीमा सफा पानी पिउने र सडेगलेका कुरा नखाने भन्ने सन्देश दिइएको छ । लुरेको सफलता यो एकाङ्की यस संग्रहको अन्तिम एकाङ्की हो जसमा अर्काको धान काटेरपनि पढेर राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्ने लुरेका चित्रणबाट श्रम र अध्ययनको महत्व दर्शाइएको छ । संक्षेपमा समसामयिक सामाजिक विषय र पात्रका द्धारा अपसंस्कृतिको विरोध, बालबालिकामा राजनीतिकरणको निषेधन, राजनैतिक विसङ्गति जस्ता कुरालाई बालबालिकाबाट ग्राहय हुने भाषाबाट अभिव्यक्त गरिएको पाइन्छ । अदालती शैलीको प्रयोग यस एकाङ्की संग्रहको अर्को विशेषता हो ।
निष्कर्षः नारीमनअनुसार बालबालिकाका परिवेश र तिनीहरूबाट उनीहरूले भोगेका पीडा तथा उनीहरूमा अपेक्षित चारित्रिक विकासको उपयुक्त सन्देश प्रसार गर्न शर्मिलाले बालसाहित्यमा राखेको रुचि, विषय र कथ्यको चयन तथा प्रस्तुतिकरणमा बालसम्प्रेषणीय भाषाशैली जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा उनको मौलिक विशिष्ट स्थान निर्माण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
-१) सर्न्दर्भ विविध कृतिबारे
-१) प्रधान, प्रमोद २०६१, नेपाली बालसाहित्यको इतिहास, काठमाडौँः विवेक सिर्जनशी प्रकाशन प्रा.लि. ।
-२) पराजुली, कृष्णप्रसाद २०५८, चर्चा नदीगीत गाउँछको, दायित्व वर्ष१५, पूर्ण्ााङ्क ४१ ।
-३) बन्धु, चूँडामणि र अन्य २०४२, नेपाली बालसाहित्यको र्सर्वेक्षण, नेपाली शिक्षण समिति, त्रि.वि. ।
-४) बन्धु, चूँडामणि २०४८, विद्यालयमा बालसाहित्य, बालसाहित्य ।